Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ịntanetị nwere nkwarụ na-ahụ ihe siri ike na ebe nrụọrụ weebụ maọbụ na ọ gaghị ekwe omume iji nanị n'ihi ụzọ ha si hazie ya.
Ejirila weebụsaịtị a ka ọ bụrụ ihe dị ka o kwere mee ma kwekọọ na ụdị nkà na ụzụ na-eji eme ihe na-eji ndị nwere nkwarụ, gụnyere ndị na-agụ akwụkwọ ihuenyo.
Dị ka ndị dị otú ahụ, ndị ọbịa nwere ike ijikwa akara ederede, agba, ụdị ejiji na ọbụna jiri 'igodo nwere ike' na keyboard kama igwu ka ị na-agagharị na ibe.
Na-agagharị na ebe nrụọrụ weebụ a
Ka ị na-agagharị na ebe nrụọrụ weebụ a, biko jiri menu dị n'elu nke ibe. Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-agụ ihe ntanetị, ị nwere ike iji alt altrị ohere - M (pịa tinye), nke a ga-akpọrọ gị gaa na nchịkọta nhọrọ, site na ebe ị nwere ike iji igodo igodo ịnyagharịa site na njikọ.
I nwere ike igbanwe oke ederede nke akwụkwọ a na nhọrọ gị site na nchọgharị gị. Na Internet Explorer, họrọ Lee, wee Sị ederede, wee bụrụzie nha.
Ị nwere ike ibubata ụdị akpaaka gị na ebe nrụọrụ weebụ a. Na Explorer họrọ Ngwaọrụ, wee họrọ Nhọrọ Ịntanetị, wee gaa na taabụ 'General', họrọ Mmalite. Pịa ọzọ na ihe ọ bụla ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime igbe atọ iji eleghara agba, ụdị n'ụdị ma ọ bụ ụdị nha. N'otu window ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe ụdịdị gị site na ịpị igbe ngosi ahụ na-ekwu, 'akwụkwọ usoro site na iji ụzọ mpempe akwụkwọ' wee na-agagharị na ụdịdị gị ma pịa OK.
Anyị anwalela weebụsaịtị a nke ọma ma na-achọsi ike imeziwanye koodu anyị ma chọọ ịma ma ọ bụrụ na ịchọtala akwụkwọ a ma ọ bụ na ị nwere nsogbu ọ bụla.
Home Home Categories --Na-atụgharị --Zippers --Ribbon & Tape --Ụzọ --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming --Tailoring Ngwa --Garments & Ngwa --Nweghari Machine & Akụkụ --Fabric --Onye ozo gbasara Anyị --MH Isi --MH Industrial --- Ihe ndị na-arụ ọrụ --- Ribbon & Tepe Factories --- Ụlọ ọrụ dị iche iche --MH History --Trade Na-egosi - Oghere Image - Album vidio Kpọtụrụ Anyị --Odi ebe --Feedback Community --Sonyere anyị